किन हुन्छ पटक–पटक गर्भपतन ? यस्तो छ कारण – Health Post Nepal
२०७६ पुष ७ गते ११:०७
संसारमा धेरै व्यक्ति सन्तान चाहँदा चाहँदै पनि गर्भपतन भएर हैरान भएका छन् । यदि कुनै महिलाको ३ वटा भन्दाबढी लगातार गर्भपतन हुन्छ भने त्यसलाई बराबर गर्भपतन भन्दछन् । कुनै–कुनै विद्धानहरुले दुई पटक भन्दा भएकोलाई पनि स्टयान्डर्ड मान्दछन् । यदि कसैले आफ्नो खुसीराजीले गर्भपतन गराउँछन् भने त्यसलाई स्वयम् गर्भपतन भएको मानिदैन । १ प्रतिशत महिलाको सन्तानोत्पादनको उमेरका यस्तो गर्भपतन हुने गर्दछ । एक पटक गर्भ पतन भइसकेपछि फेरी गर्भपतन हुने चान्स ३० प्रतिशतले बढ्छ । गर्भपतन हुने कारणहरु कति थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन ।
प्रथम त्रैमासिकभित्र हुने गर्भपतनका कारणहरु
वंशज : आमाको उमेरसंग पनि सम्बन्धित छ । सबभन्दा बच्चाको उत्पादन गर्ने उपयुक्त उमेर २० वर्षदेखि ३० वर्ष हो । बाबुको त जति उमेर भए पनि फरक पर्दैन । आमा ३५ वर्ष, काटेपछि विस्तारै विस्तारै खतरा बढ्दै जान्छ । त्रोमोजम्सको असामान्य कारणले पनि गर्भपतन हुन्छ ।
संक्रमण : सन्तानोत्पादन प्रणलीका अगंहरुमा संक्रमण भएमा पनि गर्भपतन हुन सक्छ बराबर हुनेमा कुनै सम्बन्ध छैन ।
अटोइम्युनिटी पनि हुन सक्छ ।
चिकित्सा विज्ञानमा कारण पत्ता लागेन भने इडियोपेथिक भनिन्छ । हाम्रो धर्मशास्त्रमा उपाय नलागे पछि भाग्यलाई दोष दिइन्छ । त्यसैले कारणै पत्ता नलाग्ने पनि धेरै रोगहरु छन् ।
द्दितीय त्रैमासिकभित्र गर्भपतन
भू्रणको गर्भाशयमा बस्दा हुने समस्याले बढी द्दितीय त्रैमासिक गर्भपतन हुने गर्दछ । बराबर क्यूरेट गरेर गर्भपतन गराएका महिलाको सर्भिक्स नै असक्षम हुन सक्छ । त्यस्तै योनीबाट अप्रेशन गरेर निकालेका महिलाहरु तथा सर्भिस काटेर फालेको अवस्थामा पनि यस्तो हुन सक्छ । पाठेघरको फाइब्रोइड, महिलाको दीर्घ रोग,संक्रमण,इडीयोपेथिक आदि कारण पनि पटक–पटक गर्भपतनका कारण बन्न सक्दछ्न् ।
निदान : मेडिकल र सर्जिकल र अस्ट्रटिक वृतान्त लिनु अनिवार्य छ । वृतान्त सोध्दा पहिले गर्भपतन भएको छ कि छैन,प्लासिन्टाको तन्तुको जाँच तथा आमाको दीर्घरोग बारे थाहा पाउनु जरुरी छ । परीक्षणमा आमाको रगतमा चिनीको अवस्था,भी.डी.आर. एल., थाइरोइड फक्सन,हिस्टेरोक्कपी,ल्याप्रोस्कोपी,क्यारोटाइपीङ्ग (लोग्ने स्वास्नी दुवैको) इन्डो सर्भाइकल स्वाव पनि जरुरी छ ।
उपचार : गर्भवति हुनुभन्दा पहिले मनोवैज्ञानिक परामर्श,३ पटक गर्भपतन भए पनि ६५ प्रतिशत अझै गर्भधारण तथा सफल बच्चा जन्माउने चानस हुन सक्छ ।
पाठेघरका रोगहरु : त्यसको उपचार गर्ने ।
क्रोमोजम्सको समस्या : यदि बाबुआमा वा एकको त्यस्तो भेटिएमा कृत्रिम गर्भाधान गर्ने कि भन्ने परामर्श गर्नुपर्छ ।
हर्मन थेरापी : हुन हर्मनको कमी छ त्यसको उपपचार गर्ने ।
संक्रमण उपचार : मूत्र प्रजनन् प्रणलीको रोग भएमा उपचार गर्ने ।
१. महिलालाई सहानुभूतिपूर्वक व्यवाहर गर्ने,
२. अल्ट्रसाउण्ड गर्ने : यसले खास नोक्सान गर्दैन ।
३. विश्राम: गर्भपतन हुने अवधिको २ हप्तादेखि नै विश्राम गर्ने । किनभने समयमा गर्भपतन हुने गरेको सानो वृतान्तबाट थाहा हुन्छ ।
४. कडा काम,यात्रा तथा यौन सम्पर्क वर्जित गरिएको छ ।
५. फोस्फोलिपिड कम भएको बिरामीहरु एस्पिरिन,पे्रडनिसोलोन तथा हेपारिन ३४ हप्तासम्म दिइन्छ ।
६. कारण अनुसार चिकित्सकले के गर्ने चरण छुट्याउनु पर्छ ।
७. दिसा कब्जियत भएमा इनेमा वा सपोजिटोरियम दिनुपर्छ । विस्तारै बिरामीको अनुहारमा खुसीपन, उल्टी रोकिने, भोक जान्ने,जिभ्रो भिजेको , रक्तचाप बढ्ने ,पिसाबको मात्रा बढ्ने गर्छ ।
बिरामीलाई ननशाबाट खाना बन्द गर्नुभन्दा पहिले मुखबाट खाना खुवाइने प्रयास गर्नुपर्छ । सुरुमा बिरामी उल्टी बन्द हुन्छ । तब मात्र सलाइन बन्नद गनर्नुपर्छ । सुरुमा सुखा पाउरोटी,बिस्कुट टोष्ट दिइन्छ । छिटो–छिटो थोरै थोरै खुवाउनु पर्छ । नखाने उल्टी मात्र गरे पछि जल वियोजन हुन्छ तथा बिरामीलाई जलवियोजन हुने भोखमरी हुने र केटाएसीडोसिस हुन्छ । सबै प्रयास गर्दा गर्दै पिन उल्टी नरोकिएमा गर्भपतन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रचलित नियम काननून पुर्याउनुपर्दछ । हाल मेडिकल पृष्ठभूमिमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।